Sandblasting Media Market size na-atụ anya iru USD 441,9 nde site 2023 - China Shanghai Bosun abrasive
Steel Cut waya Shot
Igwe anaghị agba nchara Cutwire Shot
Brown gwakọtara alumina
Black gwakọtara alumina
Glass Kpụrụkpụrụ Ọlamma
Ọla kọpa slag
Ọla kọpa Shot
Sandblasting Media Market size na-atụ anya iru USD 441,9 nde site 2023
Sandblasting Media Market size na-atụ anya na-eto eto na 6.5% CAGR si 2016 na 2023. Global sandblasting media ahịa size, na olu okwu, ka atọrọ ka na-eto eto na dị n'okpuru 6% CAGR. US sandblasting media ahịa size bụ gafere USD 96 nde site 2023.
robotic ọgbụgba ọkụ na usoro na-esiwanye nakweere iji welie akporo sandblasting media ahịa size na ebe àgwà akara mkpa na-adịghị zuuru site etozu akpaaka ngwọta. Industries tinyere aerospace, akpakanamde, ọgwụ na n'ji ngwá electronic ka ojiji nke a ngwá maka ọtụtụ ngwa gụnyere ihe onwunwe mwepụ, nchegbu efe, ebu ihicha, elu nkwadebe, mkpuchi mwepụ na shot peening.
Nhọrọ atụmatụ nyere ndị dị otú ahụ dị ka servo achịkwa rotary positioner, akpaghị aka media eruba akara, akpaka gbawara mgbali akara, rotary ube ike, omenala data collection, akụkọ ọgbọ, akpaka mgbake yiri ụgbọala ina. US sandblasting media ahịa size na-eme atụmatụ na gafere USD 96 nde site 2023.
Sandblasting media ahịa ngwa na-agụnye ojiji nke Abrasives bee, roughen, ezigbo, dị ọcha ma ọ bụ Polish na-ebupụta, ma ọ bụ iji wepụ ihe gbanwee n'elu akụkụ ma ọ bụ shapes. Ke adianade do, ndị a abrasive ahụ na-na-eji na ntekwasa na o sie forms maka ọtụtụ ngwa gụnyere polishing, ọnwụ, n'elu finishing, ma na-egweri. Industries dị ka ewu, akpakanamde, aerospace na ulo oru bụ isi njedebe-use ebe.
Key ghọtakwuo si akụkọ na-agụnye:
Aluminum oxide abrasive ọgbụgba ọkụ ahịa gua ihe karịrị 10% nke ụlọ ọrụ ike na 2015 na a na-eme atụmatụ na-eto eto na 7.2% CAGR si 2016 na 2023. Ọ na-họọrọ maka pụrụ iche ngwa na nke a akpan akpan elu imecha a chọrọ na di mmezi eri.
Steel shot na grit na-atụ anya inweta ịrịba ụlọ ọrụ ike si 2016 na 2023 esighịkwa ọtụtụ ojiji na n'ume nhicha oru maka iwepụ na nkume igwe nri ọnụ ọgụgụ, na agba na nchara na site ígwè na-ebupụta.
Silica sandblasting media ahịa òkè adịkwaghị zuru ụwa ọnụ na oriri na 2015. Nke a ina isi, si n'aka si Asia Pacific, ebe ihe okụt agụchi n'ihi enweghị ụkpụrụ ndị yiri ndị hụrụ na isi na mba Europe, nakwa dị ka ala price mgbe tụnyere ọzọ ihe.
Asia Pacific sandblasting media ahịa òkè dị n'elu 45% na 2015. Ịrịba inogide ibu oru na-eto eto akụrụngwa emefu mma maka mpaghara.
* Captcha: Biko họrọ Flag
Post oge: Aug-15-2016
Ụlọ 2517, No 16, Huayuan Road, Shanghai, China
Ekwentị: + 86-21-56309596
Ekwentị: + 86-21-56303465